တကယ့်နေ့! | Martech Zone
အင်္ဂါနေ့, ဖေဖော်ဝါရီလ 13, 2007 တနင်္ဂနွေ, စက်တင်ဘာလ 30, 2012 Douglas Karr
ယနေ့နံနက်ကျွန်ုပ်ကားသို့ထွက်သွားစဉ်ရေခဲသောမုန်တိုင်းနှင့်ချက်ချင်းထိုးဖောက်ခံရသည်။ အေးစက်နေတဲ့မိုးရေကိုမြင်ယောင်ကြည့်ပါ။ ငါ့ကား (Ford 500) ထဲမှရေခဲတုံးကြီးကိုကျိုးပဲ့ပြီးနောက်ဆုံးည ၁၀ နာရီခန့်နှင်းကျသောနှင်းများကိုရှင်းပစ်လိုက်ရသည်။ ကလေးတွေအိမ်မှာနေတယ်။ ကျောင်းကိုဖျက်လိုက်တယ်။ ငါပြaနာအများကြီးမပါဘဲအလုပ်လုပ်စေ (ကောင်းမြတ်ခြင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အောက်).
ငါနှင်းများမှတစ်ဆင့်အလုပ်လုပ်ရန်လုပ်ကွက် (၄) ခုကိုတိုးမြှင့်လိုက်ပြီးတော်တော်လေးပင်ပန်းသွားသည် (ဟုတ်တယ်၊ ငါသိတယ် ... ကိုယ်အလေးချိန်!) ။ အလုပ်ခွင်၌အိတ်များနှင့်သစ်သီးများသည်ကောင်းမွန်စွာစီစဉ်ထားသောသတ္တိရှိသူများကိုစောင့်ဆိုင်းခဲ့သည်။ အခြားလူ ၃၀ နှင့်အတူကြမ်းပြင်ပေါ်တွင်ကျွန်ုပ်သည်ရုံးသို့ ၀ င်ရောက်သော ၆ ယောက်အနက်မှတစ် ဦး ဖြစ်သည်။ ငါ Indianapolis ၏တောင်ဘက်တွင်နေထိုင်သည်နှင့် Northside တကယ်ဆိုးရွားရိုက်နှက်ခံခဲ့ရသည်! ပြီးတော့ဒီညထပ်ခါထပ်ခါထပ်ခါထပ်ခါထပ်ခါထပ်ခါပြောနေကြတယ်။
Indianapolis သည်နှင်းကျသောအခါလှပသောမြို့တစ်မြို့ဖြစ်သည်။ ဗိသုကာနှင့်အထိမ်းအမှတ်အဆောက်အ ဦး များသည်နှင်းများကိုနူးညံ့စွာဆုပ်ကိုင်ထားခြင်းကြောင့်မယုံနိုင်စရာဖြစ်သည်။ ငါဒီနေ့ကင်မရာနဲ့လှည့်ပတ်သွားချင်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့်လုပ်စရာအလုပ်ရှိသေးတယ်။
အလုပ်ကတကယ့်စိန်ခေါ်မှုပဲ။ ငါတစ်နေ့တာ Instant Messenger နှင့်ဖုန်းပေါ်မှာနေခဲ့ရသည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်လာမည့်နှစ်အစောပိုင်းတွင်အလွန်ကောင်းသောဖြန့်ချိမှုအရှိန်အဟုန်ကိုစတင်ရန်စတင်နေပြီဖြစ်သောကျွမ်းကျင်သောအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ရှိသည်။ အခြားသူများကအတွေးအခေါ်များနှင့်ဝေဖန်သုံးသပ်ချက်များကိုပြန်လည်ထုတ်လွှင့်ရန်အခြားသူများမရှိခြင်းသည်အကျိုးဖြစ်ထွန်းရန်ခက်ခဲစေသဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်စာရွက်စာတမ်းများတွင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမြှုပ်နှံပြီးရှေ့ပြေးပုံစံအချို့ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
အိမ်ပြန်စီးရတာတော်တော်တိတ်ဆိတ်တယ်။ လမ်းတွေမရှိတော့ဘူး၊ ငါ့သားကိုခေါ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်၊ ဘီလ်မိုthe်းပွင့်၌ကားမောင်းအတွေ့အကြုံအချို့ရရန်ထွက်။ နှင်းဖုံးတစ်ချောင်းနဲ့အချည်းနှီးတွေအများကြီးတွေ့ခဲ့ရတယ်။ ငါသူ့ကိုဒိုးနပ်တစ်ချောင်း၊ ထိန်းချုပ်မှုအကျင့်ပျက်ပြားခြင်း၊ လျှောခြင်းနှင့်မြန်မြန်ဆန်ဆန်ဘရိတ်ခြင်းကိုပြုခဲ့တာပါ။ သူက (ငါကဲ့သို့) ကားကိုကိုင်တွယ်ပုံကိုကြည့်ပြီးတော်တော်လေးအံ့သြသွားတယ်။ ထိန်းချုပ်မှုများနှင့်ဘီး drive အားလုံးသည်ဤမျှလောက် ပို၍ ထိန်းချုပ်ထားသည်။ အံ့သြစရာပါပဲ သူဟာမိနစ် ၃၀ လောက်လေ့ကျင့်ခဲ့ပြီးနောက်ရဲတစ်ယောက်ကိုခေါ်ပြီးကျွန်မတို့ပတ်ပတ်လည်မှာရှုပ်နေပြီလို့ထင်ခဲ့ရင်ကျွန်မတို့ထားခဲ့တယ်။
ညနေစာစားဖို့ကျွန်တော်တို့ရပ်လိုက်တယ်။ အိမ်ကိုပြန်လာပြီး PHP နဲ့အတူကစားခဲ့တယ် Technorati ၏ API။ Code နမူနာအချို့သည်သူတို့၏ site (hint, အရိပ်အမြွက်) တွင်နှစ်ပေါင်းများစွာထိခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ PHP5 ၏ XML ကိုကိုင်တွယ်ခြင်းဖြင့်တစ်စုံတစ်ယောက်သည်မကြာမီအသစ်ပြုပြင်ခြင်းအချို့ပြုလုပ်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်မျှော်လင့်ပါသည်။ ငါ code အချို့ရေးသားခဲ့ပေမယ့်တကယ်တမ်း PHP မှတစ်ဆင့်မှန်ကန်သောတုန့်ပြန်မှုများမရခဲ့ပါ။ ယခုငါစိတ်ပျက်မိပြီးညကိုခေါ်သည်။ ငါသူတို့ API လားဆိုတာမယုံဘူး။ ငါဘာမှပြwithနာမရှိဘဲဘရောက်ဇာမှာငါ့တောင်းဆိုမှုကိုဖြတ်ပြီးကူးထည့်နိုင်တယ်။
ကျွန်ုပ်၏မျှော်လင့်ချက်မှာကောင်းမွန်သောဝစ်ဂျက်တစ်ခုတည်ဆောက်ရန်ဖြစ်သည်၊ ၎င်းသည်ဘလော့ဂ်၏ကိုယ်ရေးအကျဉ်း၊ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်၊ နောက်ဆုံးရေးသားချက်များ၊ တိမ်တိုက်များစသည်ဖြင့်သင့်ကိုယ်ပိုင်ဘလော့ဂ်တွင်တင်ရန်သို့မဟုတ်အခြားသူတစ် ဦး ဦး ကိုရှာဖွေရန်လွယ်ကူစေရန်ဖြစ်သည်။ ငါအဲဒီကိုရောက်မယ်၊ စိတ်မကောင်းပါဘူး၊ ဒီဟာပိုအသုံးဝင်တဲ့ post မဟုတ်ပါ။ ငါမကြာမီပြန်လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ရလိမ့်မယ်!
14:2007 pm မှာဖေဖော်ဝါရီ 4, 39
ငါတကယ်တော့ trackbacks နှင့်ပတ်သက်။ သတင်းအချက်အလက်အချို့ကိုရှာဖွေနေခဲ့သည် (ထိုနည်းတူသင်၏ site ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်) ဒါပေမယ့်ငါမယုံနိုငျသညျ, ဂရပ်ဖစ်အပေါ်ဒီမှာငါအဘယျသို့မြင်သနည်း ငါ Richmond နဲ့သိပ်မဝေးပါဘူး၊ ဒါကြောင့်ဒီဆီးနှင်းအားလုံးဟာကျွန်မအတွက်အံ့သြစရာကောင်းတယ်။ ဝိုး! 🙂
14:2007 pm မှာဖေဖော်ဝါရီ 8, 17
သင် Trackbacks Maciek ၌သင်လိုအပ်သောအရာကိုတွေ့ရှိခဲ့သလား။ ငါ post ကိုပြု၏ ဒီမှာ.
14:2007 pm မှာဖေဖော်ဝါရီ 11, 05
ဟမ်၊ အင်းငါရှာနေတာကိုတွေ့ပြီ၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Serendipity ထက်ဘာကြောင့် WP ကဘာကြောင့်ပိုကောင်းတာလဲလို့ငါ့ကိုပြောပြပါလား။ ကျွန်ုပ်ဘလော့ဘ်ကိုစတင်လိုက်ပြီး Serendipity software ကို သုံး၍ သင်သိပါသလော။
[ငါပိုလန်နိုင်ငံမှလာသည်၊ လက်ရှိဂျာမနီတွင်နေထိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်အတွက်ထိုမုန်တိုင်းများသည်ထူးဆန်းသောအရာမဟုတ်ပါ၊ သို့သော်သင်၏နယ်မြေ၌မူအလွန်ရှားပါးသည်။ ပျော်မွေ့ပါစေ]
14:2007 pm မှာဖေဖော်ဝါရီ 11, 36
နှင့်အကျွမ်းတဝင်ဖြစ်ခြင်းမဟုတ် Serendipity တို့ငါသည်သင်တို့ကိုကအသုံးချဖို့မှဖျောင်းဖျချင်မှာမဟုတ်ဘူး။ ကျွန်ုပ်သည် WordPress ကိုနှစ်သက်သူဖြစ်ပြီး၎င်းကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်စွမ်းနှင့်၎င်းတွင်ရှိသော web ရှိနေခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ blogging software ၏အင်္ဂါရပ်များ (pings, trackbacks, commenting, blogrolls စသည်ဖြင့်) သည်ပိုပိုပြီးပုံမှန်ဖြစ်လာသည်ဟုထင်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်ကြိုက်နှစ်သက်ပါက၎င်းကိုပြုလုပ်ပါ။
ငါဖတ်သောဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်မှာ Serendipity ကိုအလွန်လေးစားစွာကိုင်တွယ်ပြီး၎င်းအင်္ဂါရပ်သည် WordPress နှင့်အနီးကပ်ကိုက်ညီမှုရှိသည်၊ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်အခြားတစ်ခုထက် ပို၍ ကောင်းသည်ကိုမသေချာပါ။